» महाधिवेशनको रोकिएको प्रक्रिया तिहार लगत्तै सुरु हुन्छ : महामन्त्री कोईराला
महाधिवेशनको रोकिएको प्रक्रिया तिहार लगत्तै सुरु हुन्छ : महामन्त्री कोईराला
चितवन । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको रोकिएको प्रक्रिया तिहार लगत्तै सुरु हुने बताएका छन् । आज चितवनमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा महामन्त्री कोइरालाले विवाद रहेका १३ जिल्ला सहित अन्य रोकिएका जिल्लाको समेत तिहार लगत्तै अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुने बताएका हुन् ।
उनले भने, “तिहारपछि रोकिएका जिल्लाको अधिवेशन हुन्छ । अब सार्ने अवस्था छैन । महाधिवेशन समायमा नै गर्नुपर्छ ।” १३ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेको भन्दै उनले देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूहबाट एउटै उम्मेदवार बनाउने कसरत भइरहेको उनले जनाए । कोइरालाले भने, “छलफल भइरहेको छ । संस्थापनइतर समूहबाट एउटै उम्मेदवार बनाएर महाधिवेशनमा जान्छौ ।” आफु, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह सभापतिको दौडमा रहेको भन्दै उनले आफु बलियो उम्मेदवार रहेको दाबी गरे ।
बैशाखमा निर्वाचन हुनै सक्दैन : कांग्रेस महामन्त्री कोइराला
कोरोना संक्रमित काँग्रेस महाममन्त्री शशांक कोइराला अस्पताल भर्ना
कांग्रेसमा महाधिवेशनको रौनक सुरु, पार्टीका पदहरु सभापतिको दाईजो नभएको केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीको टिप्पणी